Selected 1971 Outstanding Student list in Newspaper ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ – ၁၉၇၁ လူရည်ချွန် စာရင်းများထုတ်ပြန်ကျေညာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ ဘာသာေရး တရားေခြမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေပမ်ား
My family photos »
Dear (Daw) Than Than Nu, I may be seen as quite selfish and greedy. But I hope that you and other Leyuchun friends would forgive me for copying your postings of photos and your letter above in my blog.
Asamigrant, I wish to leave some clue for my grandchildren and their descendants about their ancestor (me) in Malaysia.
Although I wish to know my ROOTS back in Afghanistan, Pakistan, India and my wife’s root in Yunnan China, we have no records as our ancestors had migrated very long time ago, already cut their umbilical cords and intermarried with Myanmar, Shan etc.
လူရည်ချွန်မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းနေ့တိုင်း ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရှာဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ ကိုယ်သိတဲ့၊ မှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ရှာရတာလဲ အမောပါပဲ။ Profile picture လေးကို ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ရုပ်ကလေးတင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ၊ မှတ်မိရတာပေါ့။
ပြောသာပြောရတာပါလေ ငယ်ရုပ်တွေမြင်ရင်တောင် မှတ်မိတော့မယ်မထင်ပါဘူး၊ ဒီတော့လည်း
မိတ်ဆွေအသစ်တွေပေါ့နော။ဒါနဲ့ စာအုပ်သေတ္တာမွှေနှောက်ရှာပြီး ဓါတ်ပုံတွေ၊ သတင်းစာမှတ်တမ်းတွေ ထုတ်ယူထားပါတယ်။
နည်းနည်းချင်းတင်သွားပါမယ်။ဓါတ်ပုံတွေကပြန်တင်ဖို့ သိပ်မလုပ်တတ်လို့ သားတော်မောင်
အားမှ ကူခိုင်းမယ်။(၁၅.၃.၁၉၇၁) နေ့ထုတ် ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ( အဲဒီအခါတုန်းက တစ်ထောင်လို့ မရေးသေးဘူး) ရဲ့ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာမှာ…..”လူရည်ချွန် စာရင်းများထုတ်ပြန်ကျေညာ”တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်၊သိပ္ပံ၊အထက်တန်း၊အလယ်တန်းပါဝင်။
(ဒီနေရာကစပြီး သတင်းစာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အတိုကောက်ရေးမယ်နော်)
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ …….ပထမနှစ် ဝိဇ္ဇာ( ဥ ) မောင်မောင်လင်း၊သိပ္ပံ (ခ)မောင်ဇော်ဝင်း
ဒုတိယနှစ် ၊၊ (မ) မခင်မေချစ် ၊ ၊၊ (ဘ)သိဂီ ၤဆွေ
တတိယနှစ် ။ (စ)ကြူကြူသန်း ၊ ။ (ခ) မြင့်ဆွေ
စတုတ္ထနှစ် ။ (ပ)မောင်စိန်ဦး ၊ ။ (ခ)မောင်မောင်ဌေး ……………..
China-Myanmar railways (drkokogyi.wordpress.com)
Tags: Afghanistan, Asia, Burma, India, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Yunnan
This entry was posted on May 19, 2011 at 8:29 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.